Ngobusuku obandulela ngamaholide, lapho kuqala entwasahlobo nasehlobo, sonke uqale ukucabanga leli holidi ezayo. Izinketho inhlangano yayo isizini efudumele yavama: zokungcebeleka ne kolwandle futhi ilanga okwamanje eziningi. Kodwa kuthiwani ngazo zonke labo baye eholidini ebusika? Uma ucabanga ngaphandle iholidi beach, Amabhishi anesihlabathi inothi afudumele Thailand. Isizini lapha iqala ngo-November futhi ihlala kuze April - yithuba elihle ukuba phakathi ebusika endaweni yasezulwini, ezungezwe nxazonke by nature enhle. Muva nje, izindawo zokungcebeleka Asian kuyanda kakhulu, Thailand iyathinteka. Ethandwa kakhulu resort Thai of Pattaya ubhekwa - maphakathi ukuzijabulisa wezwe. Kulapha zonke izimo ze-iholide ngiyilibale: langa amabhishi kanye crystal emanzini acwebile ngokuhlanganiswa nightlife, uhlelo ocebile zamasiko - ngeke be bored lapha.
Yiqiniso, indiza eMoscow - Thailand kunalokho eside (amahora 9-12), kodwa ke ningalenzi iphutha, kuyakufanelekela it. amabhishi Endless sandy, nemvelo langa, ingqalasizinda zokungcebeleka, yebo, exotic - into ngeke abashiye ubani nandaba. Yingakho Thailand nazo zonke zokungcebeleka zayo kuyanda omkhulukazi phakathi izivakashi ezivela emakhoneni ezahlukene wonke.
Amahhotela e Pattaya ethulwa ezihlukahlukene eyanele, zikhona izikhungo ezisemadolobheni ngaphezulu, kude le ugu. Ihhotela ogwini kunzima ngempela ukuthola, kodwa akudingekile. Ngaphezu kwalokho, amahhotela amaningi ase-Asia, hhayi kuphela ayihambisani incazelo yalo, kodwa futhi, ngomqondo obanzi, uyakwazi ukumosha iholide. Ngakho-ke kudingekile ukuba baqaphe kakhulu, ngisho bafune ekhetha ihhotela, unake kakhulu ukubuyekezwa zezivakashi Okuyınqo, ozokusiza ukuba ngeso elibanzi ukubheka zonke izinketho ezingaba khona. Ngokuvamile izivakashi ukhethe Amahhotela e Pattaya neThailand ngokuvamile, ngenxa yezizathu ukuthi igumbi bona uyolala ebusuku kuphela. Siphakamisa ukuba adonsele ukunakekela amahhotela maphakathi no-ontengo yakhe yayinqunyiwe. Lokhu Iplanethi Ebomvu Pattaya (isib. Tune) 3 *, okuyinto thina kuzosiza ahlaziye kahle zonke izinhlangothi kudingeka. Okokuqala, kuyathakazelisa bazi yiziphi izimo ukuphumula banganikeza.
Ngakho Ihhotela Iplanethi Ebomvu Ihhotela Pattaya inama esihle esisendaweni ekahle kakhulu ebhishi ngenxa kuba ngokoqobo endlini ngendlu. Ukuze isikhungo ukuzijabulisa 4 nje km - engafinyelelwa ngezinyawo noma ukusebenzisa izithuthi zomphakathi. Isibhedlela International ngaphakathi ukuhamba ibanga, ngakho uma kwenzeka kuba khona ukuhanguka ilanga noma inkinga kancane impilo ungahlala ubantithe ukwelashwa.
Ngo ukuhamba ibanga kusuka yehhotela izitolo, nemishayo, zokudlela kanye konke ukuzijabulisa edolobheni. Yiqiniso, uma uhlela ukuya eholidini nezingane ezincane, leli hhotela ubungeke ukulingana. Futhi zonke ngoba kule sizini ngempela aminyene ezinomsindo ebusuku ayilokothi iyeke umculo.
Izivakashi uqaphele ukuthi isheke ehhotela Iplanethi Ebomvu Pattaya (isib. Tune) 3 * kwenzekani fast ngokwanele. Ngisho nalabo izivakashi abeza phambili kwethemu, ukuthola okhiye egumbini imizuzu 10-15. amaholide Sicela futhi akukho idiphozi. Njengoba kunjalo kubo bonke abanye ehhotela Asian, efika khona izisebenzi ehhotela kudingeka uhlole isimo imishini kanye amapayipi, uma ukwehluleka kancane ukubuza ngokushesha iqedwe.
Ihhotela kuyinto kahle esikhulu ngezindinganiso wendawo - Izivakashi uphiwa yokuhlala kwelinye 192 amakamelo. Iningi amakamelo imibhede twin ukuthi zingacindezelwa uma kunesidingo. Kukhona amakamelo ahlomele abantu abakhubazekile, e Iplanethi Ebomvu Pattaya (isib. Tune) 3 *. Guestrooms ihlangana ngokuphelele isigaba ihhotela.
Igumbi ngalinye has a yokugezela yangasese nazo zonke zokugeza ezidingekayo kanye nemikhiqizo yezimonyo in, ezidingekile izinqubo yokuhlanzeka. Ngaphezu kwalokho, bonke abanye bayoba TV neziteshi satellite, kuhlanganise Russian. Yiqiniso, eholidini TV akuyona isidingo, kodwa ikuvumela ukuba ngiwufeze izindaba zomhlaba, kanye ithuba elihle kakhulu uphumule kusihlwa ngesikhathi ebuka uhlelo movie okuthakazelisayo.
Banikezwe okuthena amandla ukushisa kanye stuffiness isizini esingokwemvelo, igumbi ngalinye has air conditioning ne. Kuyinto unesibopho nokugcinwa freshness kanye thunzi emnandi. Eqinisweni, i-izindleko ezincane yokuhlala inikeza izimo ezinhle ngaleso Iplanethi Ebomvu Pattaya (isib. Tune) 3 *. Izibuyekezo beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni yangempela kuphela agcizelele leli, njengoba ehhotela wakwazi ukuthola simo omuhle ethandwa kakhulu travel inthanethi. Amakamelo mancane, kodwa ehlanzekile ukhululekile. Kukhona konke okudingeka uphumule. Igumbi ngalinye has a ephephile ukugcina izinto eziyigugu, imali kanye imibhalo.
Ukungabi bikho esiqandisini kungenziwa ngokudida ezinye izivakashi, kodwa zinikezwe Eqinisweni izindleko kwesabelomali abahlala kuwo, athethelelwe, futhi lokhu ukuntula. Ikakhulukazi ngoba iningi izivakashi badle imishayo zendawo zokudlela. Ngeshwa, amakamelo akudingeki balcony, kodwa ehhotela itholakala emgwaqeni yesibili kusukela lolwandle, ngakho ujabulele izivakashi ngasolwandle besingeke siphumelele. Njengoba ezothatha isikhundla steel kuvulandi namafasitela amakhulu phansi, okuyinto bagcwalise isikhala ngezinombolo ukukhanya ezidingekayo.
Njengezinye amahhotela kakhulu emadolobheni Iplanethi Ebomvu akuyona indawo enkulu landscaped. Uma zisetshenziswa ukuthi iholide ngokunethezeka ehhotela Turkish, cishe umbono wokuqala akulona rainbow. Kodwa bonke abanye Pattaya ayakhelwe ezizungeze ihhotela, isimiso, kukarisa kangaka futhi ezithakazelisayo ukuthi ihhotela kanye ikamelo kuphela edingekayo ukuze iqalele kabusha futhi silale.
Akekho izivakashi yesimanje akusho ukucabanga ngokuphila kwakhe ngaphandle Internet. Ngakho bonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni sendleleni ukuthola iphasiwedi kusukela isibalo inthanethi wireless. I-signal esanele ukuxhumana nezihlobo, nabangane kanye ukubukela amabhayisikobho zakho ozithandayo kanye nezinhlelo ngesikhathi sangempela.
Ihhotela kuqashelwe ubusuku nemini, okungase ukunikela, hhayi wonke amahhotela e Pattaya. Ngakho, izivakashi kanye amaholide abakwazi ukhathazeke mayelana nokuphepha kwabo. Ngaphansi kwesivikelo kanye on-site yokupaka, okuyinto evame ezisetshenziswa yizivakashi irenti zendawo izinkampani ngesithuthuthu - ifomu ethandwa kakhulu wezokuThutha kuleli dolobha.
Amagumbi bahlanza nsuku zonke, amathawula kanye amashidi washintsha eyicela izivakashi - Igumbi nokuhlanzeka inakekelwa. Ngesikhathi reception for imali eyengeziwe ongawabhuka isevisi Shuttle esikhumulweni sezindiza. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi edeskini ulwazi, ungathola enemininingwane ibalazwe idolobha babebonisa ezikhangayo, amasayithi zamasiko nezomlando. Abasebenzi eziwusizo kuzosiza ukucacisa uhlelo uhambo.
Uma indiza yakho eMoscow - Thailand kuzokusa resort bengakakulungeli ukuba asebenzise leli, ungahlala ukushiya izikhwama zakho ku okugcinwa, ukushintsha izingubo futhi siye ebhishi, ngaphandle zokuchitha umzuzu isikhathi.
Indawo at Iplanethi Ebomvu Pattaya (isib. Tune) 3 * kuhlanganisa ukuvakashelwa sasekuseni yokudlela. Eqinisweni, i-khona zokungcebeleka Asian ibhulakufesi ke kuyinto evamile. Ziyakwazi ejwayelekile elayisi, amaqanda, amasosishi lisikiwe, izithelo nemifino, ikhofi, itiye nesiphuzo ongakhetha kuzo. Yiqiniso, ngemva kwezinsuku ezimbalwa ukuhlala kwasekuseni ehhotela kungaba podnadoest njengoba kungekho ezihlukahlukene ezahlukene, kodwa alambe ngokuqinisekile kungabikho muntu.
Sea akekho kuphela iminithi 5-7. Kodwa akubona bonke izivakashi ukuthola indawo efanelekayo yokubeka iholidi beach. Kodwa impela kancane uhamba ibanga ezingasogwini, uqiniseka ukuthola indawo ethulile hhayi Kwakugcwele ebhishi ehlanzekile anesihlabathi kolwandle. izivakashi eziningi zikholelwa ukuthi Pattaya, isimiso, azikwazi ukubhukuda ngenxa udaka ikuyo yonke indawo. Kumelwe ngivume ukuthi edukisayo ngokujulile: kolwandle akuyona dirtier kunalokho esingakubona owabona zokungcebeleka yesifunda Black Sea. Futhi zonke ngoba isizini ogwini uya lenqwaba izivakashi ezivela emakhoneni ezahlukene wonke. Ngaphezu kwalokho, akufanele sikhohlwe ukuthi Pattaya konke okunye futhi emzini onechweba. Uma ufuna esihlabathini ephelele elimhlophe kanye crystal amanzi olwandle ecacile, siye endaweni eseduze esiqhingini Koh Lan.
Uma ufuna kukho isabelomali, ehhotela, lapho ukuhlela ukuchitha ebusuku kuphela, Iplanethi Ebomvu Pattaya (isib. Tune) 3 * kungaba indlela enhle. Ihhotela ojabulela indawo nelungelo: eduze ukuzijabulisa, ulwandle nakho ebhishi ngampela ingu kwi emnyango. Yingakho, uma ufuna kukho okuhle for holiday yakho, engabizi futhi ukhululekile, ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze ehhotela.
Emahhotela aphambili e Sarov: inhlolovo izinombolo, ukubuyekezwa
Amanzi Planet 5 - iholide ogwini Mediterranean
Ukuba yingcweti ukunitha: spokes amabhuzu
Uhwebo: Usuku iholide
Yini isibonakaliso "ufafaze usawoti"?
Kukanjani ukuthweswa umqhele ka 'nesela umthetho "?